Top 10 barnaamijyadooda yeedhayso lacag la'aan ah phone Windows 2015
Maanta, Voice over Internet Protocol ama lagu ladhay u gaaban oo noo ogolaadaa in ay isticmaalaan xidhiidhada naga broadband oo casri ah si ay u sameeyaan taleefan halkii khadadka telefoonka copper qadiimo. Haddii aad u maleyso inay saabsan, waslad weyn ee biilka telefoonka jir ah loo isticmaalo si ay u tagaan oo ay u dayactirka iyo qarashka xannaaneynta ee kaabayaasha dhaqaalaha, laakiin adeegyada lagu ladhay, aad isticmaalayso si aad internet jira. Sidaas ma jiro ee ka kaaftoomi waxay khuseysaa. Sida aad qiyaasi karo, adeeg lagu ladhay guud ahaan wax badan ka jaban tahay adeega telefoonka dhaqanka iyo xaaladaha qaarkood, wicitaanada waa gabi ahaanba bilaash ah. Laakiinse reer Chine badan ee lagu iibiyo suuqa samaynta taleefan oo lacag la'aan ah Windows Phones, 10 Chine gaar ahaan taagan. Kuwan waxaa ay taageerayaan qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee isgaadhsiinta. Oo sidaasaad ku ogaan doonaa in aad la helo adeeg sare uruursanayey talooyinka.
Qaar badan oo idinka mid ah waa ay la Skype sababta oo ah adeeg ay video chat. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay bixisaa yeedhayso VoIP sidoo.
Rating: 3.5 la 289K ratings
• Haddii dhinaca kale ayaa lagu rakibay Skype, dhammaan soo wacitaanada waa lacag la'aan
• Waxaad heli lambarka telefoonka loo xilsaaray in aad marka aad iibsato credits Skype
• app waa helaa dhammaan nidaamyada hawlgalka mobile iyo desktop oo waaweyn. Sidaas waxaad kala hadli kartaa qof kasta oo gebi ahaanba dunida oo dhan.
• Iyada oo app this, waxaad u baahan doontaa si aad u iibsato credits in wac telefoonka guriga ama taleefanka gacanta lambarka
• Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay soo sheegaan in adeega si joogto ah waa hoos
Viber qiyaastii muddo ah dhawaana waxaa daray yeedhayso video iyo muuqaalada chat.
Rating: 3.9 la 41K ratings
• Waxay ku baaqeen in kale users Viber yihiin gabi ahaanba bilaash ah.
• Waxa ay taageertaa dhammaan hababka ugu waaweyn ee hawlgalka. Sidaas waxaad heli doontaa faa'iidada ku daray in aan awoodo in ay isticmaalaan Viber ku saabsan dhammaan aaladaha aad.
• Ma aha load weyn ee xadka xogta aad.
• Sida Skype, waxa aad helaysaa in ay iibsadaan credits haddii aad rabto in aad wacdaa lambarka telefoonka caadiga ah a
• Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay lahaayeen si ay ula qabsadaan dib u dhac yar oo ku traversal audio, laakiin waxaa la tixgeliyaa guud ahaan la aqbali karo sida ay tahay lacag la'aan ah
WhatsApp waxaa marwalba isku dayayaan in ay keenaan wax u gaar ah suuqa. Sannadkan, waxay ku soo bandhigay muujinta yeedhayso lacag la'aan ah iyadoo la isticmaalayo VoIP halkii adeeg gacanta aad.
Rating: 3.8 la 30K ratings
• Isticmaala technology audio ka xoogbadan, si ay u siiyaan tayada ugu wanaagsan ee suurto gal ah audio
• app The isgaarsiinta ugu caansan iyadoo in ka badan 800 milyan oo dadka isticmaala oo dunida ah. Sidaas, waxaad hubsan kartaa in inta badan aad saaxiibo u isticmaali
• Waxaa loo isticmaali karaa soo tebiyaan cross
• Lacag La'aanta ah ee hal sano oo keliya, ka dib markii taas oo markii aad leedahay si aad u kordhiso Times aad lacag yar oo ah $ 0.99 / sanadkii.
Line waa app xisbi cusub oo saddexaad oo u adeegaya in ka badan 400 milyan oo macaamiil ah ee dunida oo dhan. Tan iyo waa cusub, werinta maanta ee software weli waa buggy laakiin waxay gaarsiisaa ballamihii ay.
Rating: 3.5 la 22K ratings
• Kuu ogolaanayaa cod xor ah oo ku baaqay in la kale ee isticmaala Line
• Taageerada cross madal. Sidaas, saaxiibadaa iyo aad isticmaalayso yaabaa qalab kala duwan oo weli ku raaxaysan wicitaano lacag la'aan ah
• users Non-Line inay bixiyaan lacagta balse waa mid aad u yar
• Dhiqlaha u baahan tahay in la hagaajiyo
OoVoo leedahay in ka badan 100 milyan oo isticmaala in ka badan 130 dal oo uu ka mid yahay ugu weyn barnaamijyadooda chat video iyo farriimo adduunka. Waxay bixisaa calls video, wicitaanada cod, iyo fariimaha qoraalka ah oo lacag la'aan ah ku dhufto cross.
Rating: 4.5 la 12K ratings
• daro joojiyo buuqa echo tayada audio cad iyo ka xoogbadan, inta lagu guda jiro video iyo codka calls
• Waxay la shaqeyaan ku dhowaad nidaamka qalliinka kasta iyo qalab casri ah oo ugu
• Kuu ogolaanayaa qaybsi warbaahinta
• liiska xiriirka shakhsiga ah, Facebook iyo Twitter Add saaxiibo
Blackberry Rasuulka markii hore loogu talagalay qalabka blackberry laakiin waxaa haatan ay taageerayaan nidaamyada hawlgalka badan oo ay ka mid yihiin Windows Phone 8.0 iyo ka dib
Rating: 2.9 la 5.843 ratings
• CHAT Instant, qaybsiga sawirka iyo codka oo ku baaqday in si xor ah
• isgaarsiinta Aad gaabis wicitaanada qoraalka iyo codka labada
Iyadoo in ka badan 200 milyan oo dadka isticmaala oo dunida ah, Nimbuzz waa app ah in isku daraa xoogga internet iyo in farriin telefoonka smart. Waxaa jirtay in muddo ah oo si fiican u yaqaan ka ah bixinta fariimaha chat aan xad lahayn oo file sharing ku dhufto ee kala duwan. Inkasta oo aysan ka heli saxaafadda in dadka kale ka heli wicitaanada cod, weli waa la app weyn oo lacag la'aan ah.
Rating: 3.6 la 2.557 ratings
• Marka laga reebo wicitaano lacag la'aan ah, waxay bixisaa dhowr adeegyo kale
• Iyada oo ay taageerayaan dad badan oo la soo dhufto ee
• photos videos Share iyo saaxiibadaa on Facebook, Gtalk iyo madallo kale warbaahinta bulshada.
• calls Voice xanuunsado dhalanrog muhiim ah marka la isticmaalayo Gudoomiyaha telefoonka ee
• Ma loo isticmaali karaa in asalka
Iyadoo ICQ, waxaad ka heli yeedhayso si xor ah u tiro kasta ee Maraykanka dhexdiisa ah, laakiin haddii dhinaca kale uu leeyahay app ICQ lagu rakibay, waxaad wici kartaa meel kasta oo dunida oo bilaash ah. Hadda, waxay leeyihiin fariin ku salaysan IP iyo Muuqaal video chat iyo lambarka taleefanka ee hadda jira waxa loo isticmaalaa marka aad taleefan.
Rating: 4.1 leh 636 ratings
• Aad u fududahay in la isticmaalo interface iyo user cod saaxiibtinimo chat
• flawlessly shaqeeyaa soo tebiyaan cross
• tayada Audio waa heer sare
• Ma bixiyaan caawimo iyo taageero ku filan sida barnaamijyadooda kale
• Ka maqan kale oo dheeraad ah maadaama ay diiradda saarayaa halleeyo lillaahinimada
KakaoTalk waa fursad fariimaha aad loo jecel yahay, gaar ahaan ka baxsan North America.
Rating: 3.2 leh 339 ratings
• Waxay kuu ogolaanaysaa inaad qaadato sameeyo koox ahaan iyo shaqsi ku baaqay in dadka kale ee si xor ah
• Waxay la shaqeyaan soo tebiyaan cross
• users badan ayaa sheegay in aysan si joogto ah uga shaqeeyaan qalabka ay. App wuxuu u baahan yahay in la dib dhowr jeer
Haddii aad weligaa istaageen line at Walgreens ama daawaday infomercials habeenkii goor dambe, aad hubaal maqlay Magicjack. Waxay magacooda sameeyo bixiya ul USB in badaley aad landline in lagu ladhay laakiin hadda leedahay telefoonka app Windows ah. Tani waxay la mid ma aha sida feature-qani ku ah qaar ka mid ah kuwa kale, laakiin waxaad u isticmaali kartaa in ay wacaan in tiro kasta ee Maraykanka oo lacag la'aan ah.
• Way fududahay in la isticmaalo iyo mid aad u fudud in ay Mudanayaasha.
• tayada Audio ma u fiican yahay sida barnaamijyadooda kale laga wada hadlay
> Resource > Windows > Top 10 Apps wacaya Bilaashka ah ee Windows Phone 2015